နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Power Rangers Unleash The Power
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Power Rangers Unleash The Power
ထိန်းချုပ်ရေး: Sledge and his army of Vivix will stop at nothing to gain the power of the Energems, it's up to you to help the Power Rangers defeat them. If you like Power Rangers Unleash The Power, you can put it to your favorites. So it can be convenient for you to play later!
ကစား: 82,193 tag ကို: အာဏာကို Rangers, အာဏာကို Rangers ဂိမ်း, အာဏာကို Rangers ဆာမူရိုင်း, Red Rangers, Jayden, Jayden games, ဂျေဆန်ဂိမ်း, Jason, Jason Lee games
အာဏာကို Rangers megaforce ပြိုင်ကား
လာမည့်အဆင့်အတန်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်အနိုင်ရလို race.You စတင်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးပါဝါကိုရိန်းဂျားကို Select လုပ်ပါ။ သငျသညျအသီးအသီးအဆငျ့3ဘဝတွေကိုရှိသည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
အာဏာကို Rangers နဂါးအိမ်သူအိမ်သား
Power က Rangers နဂါးအိမျတျော၌ပျောက်ဆုံး, သငျသညျကိုယျတျောနှငျ့အစွန့်စားမှု join နဲ့သူ့ကိုအပေါငျးတို့သမိကျောင်းအနိုင်ရကူညီသူဌေးကနဂါးအနိုင်ရသင်ရှိသည်ရှိသမျှကိုအဆင့်တဆင့်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်, နဂါးတွေအများကြီးဖြစ်သောကြောင့်သတိပြုရကြမည်
အာဏာကို Rangers megaforce: လက်နက်ချဘယ်တော့မှ
Power က Rangers Megaforce အ Warstar ဂြိုလ်သား၏ခြိမ်းခြောက်မှုဖြေဆိုရန်ဒီနေရာကိုဖွစျသညျ!
အာဏာကို Rangers ဆာမူရိုင်း: အစစ်သည်တော်ရဲ့လမ်း
အဆိုပါစီးတီး, အန္တရာယ်အတွက်ငါတို့သည်သူရဲကောင်းရဲ့ Powerranger ရောက်ရှိနှင့်မြို့သိမ်းဆည်းပါ။ သူ့ကိုထိုဘေးဥပဒ်ကိုသတ်နှင့်မြို့မိဿဟာ restore ကိုကူညီပါ။ ခုန်ရန်, S ကိုကန်ဖို့, တစ်ဦးကရွှေ့ဖို့သော့များ arrow
ပါဝါ Rangers မာရ်နတ်မုဆိုး
Power က Rangers မာရ်နတ်၏မြေယာဖို့စွန့်စားမှုရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုဝင်တိုက်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့သင့်ရဲ့အထူးလက်နက်ကိုသုံးပါ။ တိုက်ခိုက်ရန်နှင့်မရွှေ့ဖို့သင့် mouse ကိုသုံးပါ။
အာဏာကို Rangers ဘေ့စ်ဘော
အကူအညီကို Power Rangers လာမည့်ပတ်ပတ်လည်မှအပေါ်ကိုရွှေ့နှင့်အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်ရရန်သူအပေါင်းတို့ကိုစွမ်းအင်ကိုနှိပ်ပါ။
Powerrangers စကိတ်စီးနဲ့ Big Air လေကြောင်းလိုင်း။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို Power Ranger သို့မဟုတ် Ninja လိပ်သင်သည်တတ်နိုင်ကဲ့သို့မြင့်ခုန်ကူညီကိုသုံးပါ